04 / 10 / 2019 - RayHaber
Ụbọchị: 4 October 2019
Atabey Ferry Road Mbuba ma mepee emepe
Malatya mepere emepe rụchara mgbasawanye na paver nke Battalgazi Atabey İskele road. Na mgbakwunye na ọrụ okporo ụzọ ọhụrụ, Obodo ukwu mepere emepe ka arụzigharị okporo ụzọ ndị dị ugbu a dịka ụkpụrụ na okporo ụzọ Atabey Ferry Port dị na Old Malatya. [More ...]
Ngwa eji eme ihe eji abia oru ihe nlebara anya nke emere site na Ordu
Ordu mepere emepe ebidola ngwa ọrụ akpọrọ Roller Compacted Concrete Road (RCC) nke na-enye ịchekwa ego ma e jiri ya tụnyere asphalt na okporo ụzọ ọdịnala n'ụzọ dị na Eskipazar nke altınordu district, mana nke kachasị sie ike na usoro nke ịdịte aka. Itinye aka na nke izizi na Ordu [More ...]
Çambaşı Ski Center pkwadebe maka Oge
Turkey si Çambaşı ịrịba ama dị iche nke ịbụ ezigbo oké osimiri na-akwadebe maka skai oge Ski 2019-2020. Çambaşı Kayak nke dikwa na 2000 acres na nha nke 650 site na Ordu Obodo ukwu ma di na nrịba anya nke 52 km site na etiti obodo. [More ...]
Ọgbanwe Ọsọ Gbanweere na Antalya
Rozọ emelitere ịgba ọsọ ọsọ. Site na mkpebi nke Antalya Metropolitan Mun Transportation Coordination Center (UKOME), ekpebiela ịgba ọsọ n'okporo ụzọ mepere emepe ọzọ. Oge ịgba ọsọ nke kilomita 70 bụ kilomita nke 82 n'okporo ụzọ na boulevards dị n'etiti etiti obodo. [More ...]
Arụ Ọrụ Bodrum Bus Station Na-aga n’ihu
Onye isi obodo nke Muğla Obodo ukwu Osman Gürün mere nyocha na ọdụ ụgbọ ala Bodrum, nke a na-arụ. N'elu ala square mita 30 nke 759 na Torba Junction na Bodrum, owuwu ahụ ga-aga n'ihu ma ga-efu 74 Nde TL. [More ...]
Haydarpaşa na Sirkeci Railway Station Tender! .. Lee Onye Na-agba Bidgwọ !gwọ Ọrụ! ..
Mmetụta maka ịgbazite mpaghara ụfọdụ na mpaghara Haydarpaşa na Sirkeci, nke ndị Minista nke wouldgbọ njem agaghị anabata nnabata nke IMM site na ịsị “ihe na - egbochi” malitere. IMM na Hezarfen Aviation nọgidere na njedebe nke nro. Kọmiti na-ahụ maka nwa n'ime mkpụrụ ụbọchị 15 [More ...]
Konya, Turkey ga-ihe atụ nke Bicycle Ụzọ
Uğur İbrahim Altay, onye isi obodo nke Konya Metropolitan Municipal, sonyere na Marmara International City Forum (MARUF) nke mere na Istanbul Congress Center. Mayor Altay kọwara Konya na Bicycle Master Plan na nnọkọ a ga-enwe n'etiti October 1-2-3 na ebumnuche “Obodo Na-ewepụta Ngwọta,. [More ...]
Abalị Night Asphalt na Sidezọ Ahịrị na-arụ na Izmit
Obodo Kocaeli, Obodo Izmit Yahya Kaptan Neighborhood Democracy Street na-arụzi okporo ụzọ na arụkwa ọrụ. N'ime ọrụ ndị Ngalaba Sayensị Science na-arụ, ìgwè dị iche iche, na -echeta asphalt n'abali, ebe ụzọ na-arụ ọrụ. korota [More ...]
Nchebe ngo si na ụlọ ọrụ nchekwa nke ụlọ
Ọrụ obodo na nke mba n’ihe metụtara radar na nchekwa nchekwa ókè, 2. Eweputara Mgbakọ International Rar na Nchebe Mkpechiala 2, naanị ihe omume pụrụ iche n'ihe gbasara radar agha na nchekwa nchekwa. Rada na agha agha mba ụwa [More ...]
A ga-arụ ọrụ E-5 n'ime ogo ọrụ Kurba Balıdere
N'ime oke mmezi Mmelite Kurbağalıdere, a ga-arụ akụkụ nke akụkụ creek dị n'etiti etiti Göztepe Bridge Mgbanwe na Mlọ Ahịa imumzụ ahịa kacha mma. A ga-emecha ọkwa larịị n'ime oke ọrụ ga-eduga n'okporo ụzọ ọrụ ọhụụ. ISKI, otu n’ime ndi otu mmekorita nke Obodo Obodo Istanbul [More ...]
Site na Ozi, Channel Istanbul Alert
Ministri oke ohia na mmiri, oru ngo Canal Istanbul, Terkos Lake na Sazlıdere Dam ga-enwe nkwarụ site n’ikwu na Istanbul nwere ike ịhapụ mmiri. Onye isi oche CHP Muharrem Erkek; okike, osisi, anụmanụ, ihe ọ juiceụ juiceụ n'ihi ikike nke ike, [More ...]
Ndi Sapanca Cable Car Tender Nyeghachi Ego?
Bursa Teleferik A.Ş. Onye isi njikwa Burhan Ozgumus, nye onyinye 1 nde TL nye onye isi obodo ahụ iji nweta asịrị ahụ dị nro, na-ekwupụta na ha abụghị eziokwu, o kwuru. Ozgumus, kwere nkwa n’oge ọ gara na isi nke Sakarya Province CHP ụbọchị gara aga [More ...]
Ihe oru ngo Kartepe Teleferik di na mmiri!
Nrọ nke uzo uzo nke Kartepe na njem Kocaeli na-eche kemgbe ihe dị ka afọ 50 bụ oge opupu ihe ubi ọzọ. 10 Disemba 2018 agaghị eru 2020, nke bụ ụbọchị nnyefe nke ụdọ ahụ na ememme ala. [More ...]
Gọvanọ Çanakkale Orhan Tavlı, 18 March 2017 na ntọala nke Onye isi ala Recep Tayyip Erdogan 1915 Çanakkale Bridge, a na-enyocha ebe a na-ewu ụlọ. Ndị isi nyocha nke ihe onwunwe Naci Çetin Akder na Ali Alper Orkun, Tahir Şahin, Gọvanọ District nke Lapseki [More ...]
Ilszọ ndị Rail na-agba akaebe na Nhiwe nke Republic
Edemede onye isi TCDD Ali İhsan Uygun akpọrọ lar Rails inggba ama maka Nhiwe nke Republic anyị wassında bipụtara na mbipụta Ọktọba nke akwụkwọ akụkọ Raillife. Nke a bụ isiokwu nke TCDD GENERAL MANAGER UYGUN “3 Septemba Kemgbe mmalite nke ọrụ mbụ na ahịrị İzmir-Aydın na 1856 [More ...]
Ankara Sivas YHT Line kwụsịrị
Na mbipụta October nke akwụkwọ akụkọ Raillife, Mehmet Cahit Turhan, Mịnịsta nke Transportgbọ njem na akụrụngwa dere edemede nke akpọrọ “Ankara Sivas YHT Line Akwụsị”. SITE N’ỌT TT T TURHAN olarak Dị ka Minista, iwu nke ụgbọ njem anyị kacha dị mkpa maka 2003 [More ...]
BTS, Kwuru maka ihe ọghọm ụgbọ oloko!
Ihe ọghọm nke ụgbọ oloko na ọnwụ igwe na nkwupụta mgbasa ozi nke United Transport Employees Union Izmir Alaka, chọrọ ka ndị na-edekọ ego n'ihu ụlọ ikpe. Nkwupụta a mere n'ihu ebepınar Warehouse, BTS Sensikası Izmir Secretary Secretary resili Mehti Seyhan gụrụ. [More ...]
Onye odeakụkọ Mustafa Hoş Nyocha Çorlu Train Disaster
Onye ọka ikpe Galip Yılmaz Özkurşun, onye nọ na-eleba anya na ọnọdụ ụgbọ oloko na Çorlu, ebe 25 tụfuru ndụ ya, chere N zoro ikike nke ikpe ikpe n'ụzọ gazeteci maka onye nta akụkọ Mustafa Hoş nke legidere anya na ọdachi ahụ kemgbe mmalite. [More ...]
Konya Metro mbụ frasi nke obi na October 2 2019 Wednesday na Ankara, Turkey, dị nnọọ elu na-agbanwe agbanwe "òkù" e mere n'ụdị usoro na-enweghị amamọkwa. Onye isi oche nke ulo oru ihe ahia n'okpuru ulo oru Minista njem na ihe oru [More ...]
Usoro nke Belsin City Hospital Rail Sistem gụnyere na mmemme itinye ego
Minista na-ahụ maka nchekwa obodo Hulusi Akar na Minista ụgbọ njem na akụrụngwa Mehmet Cahit Turhan gara Kayseri. Emere nzukọ na ntinye nke ndị ozi abụọ a ma bụrụ ndị Obodo ukwu na-akwado ya. Memduh Büyükkılıç bụ [More ...]
Taa ke History: October 23 1978 Turkey-Syria-Iraq ụgbọ okporo ígwè ...
Akwụkwọ akụkọ Họrọ ọnwa October 2019 (424) September 2019 (555) August 2019 (508) July 2019 (633) June 2019 (504) Mee 2019 (526) April 2019 (418) March 2019 (521) February 2019 (483) January 2019 (502) Ogwe 2018 (620) November 2018 (504) October 2018 (435) September 2018 (517) August 2018 (486) July 2018 (506) June 2018 (581) Mee 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (554) February 2018 (500) January 2018 (557) Ogwe 2017 (509) November 2017 (427) October 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) June 2017 (477) Mee 2017 (493) April 2017 (434) March 2017 (540) February 2017 (477) January 2017 (538) Ogwe 2016 (487) November 2016 (631) October 2016 (657) September 2016 (542) August 2016 (608) July 2016 (485) June 2016 (661) Mee 2016 (664) April 2016 (700) March 2016 (804) February 2016 (855) January 2016 (751) Ogwe 2015 (799) November 2015 (640) October 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) June 2015 (535) Mee 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) February 2015 (878) January 2015 (1077) Ogwe 2014 (963) November 2014 (826) October 2014 (771) September 2014 (598) August 2014 (808) July 2014 (911) June 2014 (735) Mee 2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) February 2014 (720) January 2014 (733) Ogwe 2013 (664) November 2013 (656) October 2013 (548) September 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) June 2013 (577) Mee 2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) February 2013 (811) January 2013 (906) Ogwe 2012 (911) November 2012 (1168) October 2012 (830) September 2012 (886) August 2012 (974) July 2012 (863) June 2012 (591) Mee 2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) February 2012 (546) January 2012 (417) Ogwe 2011 (149) November 2011 (35) October 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) June 2011 (16) Mee 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) February 2011 (24) January 2011 (13) Ogwe 2010 (335) November 2010 (12) October 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) June 2010 (19) Mee 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) February 2010 (303) January 2010 (1838) Ogwe 2009 (4) November 2009 (1) October 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) Mee 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) February 2009 (4) January 2009 (3) November 2008 (1) October 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) June 2008 (2) Mee 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) February 2008 (5) January 2008 (2) Ogwe 2007 (2) October 2007 (2) July 2007 (1) Mee 2007 (1) April 2007 (1) February 2007 (2) January 2007 (1) Ogwe 2006 (1) October 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) Mee 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) November 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) February 2005 (1) January 2005 (1) Ogwe 2004 (1) October 2004 (3) July 2004 (1) Mee 2004 (2) Ogwe 2003 (1) October 2003 (1) Mee 2003 (1) March 2003 (1) February 2003 (1) January 2003 (1) Ogwe 2002 (1) October 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) January 2002 (2) July 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) Mee 2000 (3) March 1999 (1) October 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) October 1996 (1) August 1996 (2) Mee 1995 (1) August 1992 (1) Mee 1990 (1)